ရေခဲတောင်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းဆရာ ပြောပြီ – ရှအေလငျး
ရေခဲတောင်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းဆရာ ပြောပြီ
ရေခဲတောင်တက်ရာတွင် ပြုတ် ကျသေဆုံးခဲ့ပြီဟု ယူဆနေကြသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းပညာဆရာ ဘာပြောသလဲ
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သွားဆေးတက်နေပါတယ်။ အလုပ်သင်ဖြစ်တော့မှာပါ။ ခုတတ်မြောက်လိုက်စားနေတဲ့လောကီ ပညာနဲ့ ငွေကြေးလုံးဝမတောင်းဘဲ စစ်ဆေးကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်ခရိယာန်ဘာသာဝင် ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်မခွဲခြားဘဲ လူအသက်ကယ်ကောင်းတော့ ..မြွေကိုက်လူနာ ၊ ရောဂါရှာမရဘဲ ဒုက္ခဖြစ်ငွေကုန်ဖြစ်တဲ့ ပယောလူနာတွေ ၊ ရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ရူးသွပ်နေတဲ့သူတွေကို ကုသပေးတာအကုန်လူကောင်းပတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုမှအဖြေရှာ မရ၊ သူ့ မ body ဘယ်မှာရှိလဲ ဆိုတာဘယ်သူမှရေရေရာရာ တောင်မသိနိုင်ပါဘူး။
၁။ သူ့အကျီင်္ စုတ်ပြတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စ။
၂။ မုန့်စားခဲ့တဲ့ ကိစ္စ (မုန့်စားထားတာထင်တဲ့ ကိစ္စ)
၃။ မုန့်နားမှာ ၊အကျိံင်္အနား၊မျက်မှန်အနား အလောင်းရှာမရတဲ့ကိစ္စ။
၄။အကျီင်္မှာ သွေးတစ်စက်မှ မပေခဲ့တာ။
၅။သူမ ချက်ချင်း ၊ သေဆုံး၏ ၊မသေဆုံး၏ ။ ဟူသော အကြောင်းအရာကို ကျနော်တတ်တဲ့ အကြားအမြင်ပညာ အထက်လမ်းပညာ၊လောကီပညာနဲ့…၊ သူမအတွက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုပိုသေချာအောင် ခေါ်မေးပါတယ်။
ထိုနောက်အမစိမ့်ထက်ကို ခေါ်မေးပါတယ်။… ။
သူ့ ကိုကျနော်အာရုံထဲ မှာ… သူပုံမြင်ရပါတယ်။သူငိုနေပါတယ်…၊ နဂို မူလ လူပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ဖန်ဆင်းပေးပြီး တစ်ခွန်းချင်းကျနော်နဲ့ အမေးအဖြေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။(2:45min)ကစပြီး
အဖြေ….မုန့်ကို သူမစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး၊အရင်ကစားထားတာေးထည့်ထားတာပါ၊ လို့ပြောပါတယ်…
သူပြုတ်ကျတော့….အကျီက လျောတိုက်ပြီး တောင်စွန်း၊ အတက်တွေနဲ့ချိတ်ပြီး ကျွတ်သွားခဲ့တယ်။
ကျမ…ခြေထောက် ဒူးအောက် ညိုသူကြီး နှစ်ဖက်စလုံးကျိုး သွားတယ်…။ လှုပ်မရပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာက ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အကျီင်္ပေါ်မှာ သွေးမပေပါ။
၃။အလာင်းက ရှာ မရခဲ့တာ က…ကျမက အကျီင်္ ကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့..ပေ၄၀၀လောက်အကွာထိ…လျောကျသွားခဲ့တာ…။ သတိ၁၀မိနစ်ကျော်လောက် သတိလစ်သွားတယ်…သတိ လည်လာတော့…၊မတ်တပ်တောင် မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။မရပ်နိုင်ခဲ့ ပါ။
သူဆက်ပြောတယ်…၊ထပ်ငိုတယ်၊ သူ့ ၆နာရီ လောက်ထိ မသေခဲ့ဘူး။ ဒူးထောက်ပြီး လျိုချောက်ထိပ် ပေါ်လည်းမတက်နိုင်တော့…အောက်ဘက်မှာ
လွှတ်လမ်းရှိမလားဆိုပြီး… ၆နာရီ လောက်ထိ ဒူးထောက်လက်အားပြုပြီး ဆင်း တာ…
အေးတဲ့အရှိန်နဲ့ ကျမငုပ်တုပ်အသက်ထွက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ကျမ သေတော့…ကျနော်ကိုယ်ကျမပြန်မြင်ရပါတယ်။ကျမအလောင်းနားမှားထိုင်ငိုတယ်။ ကျမ ထင်တာ…၊ ကျမ ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းအေးတောင့်ပြီး ၊ ရှေ့ကိုလည်း ညွတ်နေတော့ ဘောလုံးလို လျိုအောက် ကို တောက်လျောက်လိမ့်ဆင်းသွားတာ ပေ၃၀၀၀ကျော်လောက် ထပ် ဆင်းသွားတယ်ထင်တယ်။
ကျနော်ဆက်မေးတယ်….အလောင်းကို ရောနှင်းတွေဖုန်းသွားပြီလား… အမစိမ့်ထက်…ဖုံးသွားပြီ..။ ကျနော့် ပညာနဲ့ကြည့်တော့….သူမဟာ တောင် ထိပ် ချောက်ထိပ်ကနေ…ပေ အနက်၅၆၂၅ပေမှာ… Dead body ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
သူ့မ ….ဟုတ်တယ်ပေ၅၀၀၀ကျော်မှာ ရှိပါတယ်. … သူ့လွယ်အိတ်လေးရောပါတယ်ပြောပါတယ်(မှန်မမှန်တော့မပြောတတ်ပါ) တစ်ခု က ကာယကံရှင်မိသားစု ယုံပါလို့မပြောပါဘူး၊ လက်တွေ့အနေနဲ့ သူ့ အမေ၊ မောင်နှမဆီမှာ ဝင်ပူးခိုင်းပြီးအကုန်မေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှလည်းမယူပါဘူး၊ Onlineပေါ်လည်းနာမည်မကြီးချင်ပါဘူးနော်၊ကူညီချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပါတယ်။
Commentတစ်ခု ကို ဖတ်လိုက်ရလို့… ဒီလိုလောကီပညာ နဲ့ ကြည့်ကြပါလား…ဆရာတို့ ဆိုလို့…။ အမစိမ့်ထက်ကိုလည်း သနား လို့ပါ။ ကျနော့် ခြေသလုံးကို ကိုင်ခွင့်ပြုထားတော့… သူ အမေ၊အဖေတွေကိုပြောစရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့…သူအစစ်ပါဆိုတာ ဘယ်ညာခါပြခိုင်းတာဘယ်ညာ ခါပြရှာပါတယ်။
ကျန်တာ ဘာမေးရမှန်းမသိလို့…နတ်ဝိဇ္ဇာများကို သူမနေရာမှန် ပြန်ပို့ပေးခိုင်းပြီး လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 3:30မှာ မေးပြီးပါတယ်။ ကျွနိုပ်သည်…မဟုတ်မမှန် မ စိမ့်ထက် ဝိညည် (ခရိယာန်ဘါသါဝင်တို့နားလည်လွယ်အောင်)အား မခေါ်ဘဲ ၊ ယခုပါ အမေးအဖြေ များကို မဟုတ်မမှန် ရေး ခဲ့ပါက…၊ အဓိဠာန်မမေး အာရုံမပြူဘဲ လိမ်ညာပြောပါက ယခုတတ်မြောက်ထားသော အထက်လမ်းပညာရပ်အားလုံးချက်ချင်းပျက်ပါစေ…၊ သွားလေရာ ဘေးတွေ့ပါစေ…။ မှန်ကန်စွာ သနား၍ ကူညီ ပါက… အတိုင်းမသိပညာတိုးပါစေ…၊ ၇ရက်သားသမီး များကို ကျနော်တတ်သောကောင်းသောပညာရပ်များဖြင့်ကူညီကယ်ရပါစေ။သတည်း…
ဥပဒေ နဲ့လည်း မပတ်သက်ချင်ပါ။ ချန်ထားခဲ့သူတွေကိုလည်း တမင်ပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလုံးဝလုံးဝ စိတ်ကနေတောင်မကြံပါဘူး။ ဒါကကျနော့်တတ်မြောက်တဲ့ပညာနဲ့ကူညီပေးတာပါ။ တစ်ပါးသောလူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကျွနိုပ်ဆရာသည် ပျက်စီးစေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပါက… ကျိန်ဆို၊သစ္စာရေသောက်ပြောရဲပါကြောင်း။
ကျနော်သည်သစ္စာတရားကိုအသက်ထက် တန်ဖိုးထားသူပါ။ ဤပညာတတ်ဖို့.. ယနေ့ချိန်ထိ အရက်ပါသော မည်သည့်အစားအစာအရည်ကို ဆေးဖြစ်တောင်မမှီဝဲခဲ့ပါဘူး…ရာသက်ပန်ထိန်းသိမ်းထားသူပါ။ သူတစ်ပါး သားမယားကိုလည်းခိုးယူမပေါင်းသင်းခြင်း။ သူတစ်ပါးထိခိုက်စေတဲ့ မဟုတ်မမှန်လိမ်ညာခြင်းလုံးဝမလုပ်တဲ့သီလသစ္စာ။ ထိုသစ္စာ များကို အသက်လိုတန်ဖိုးထားတဲ့အထက်လမ်းဆရာပါ။
Credit – ဆရာအောင်မျိုးမင်း
တဖက်မှာလဲ တောင်တက်ရင်းပျောက်ဆုံးသွားသော မစိမ့်ထက်ရှိမည့်နေရာအား အတိအကျလမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်သော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို ဆုတော်ငွေ သိန်း (၅၀) ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Photo – ကိုရဲ(ပူတာအို)
ရခေဲတောငျတကျရာတှငျ ပွုတျ ကသြဆေုံးခဲ့ပွီဟု ယူဆနကွေသညျ့ အမြိုးသမီးနှငျ့ပတျသကျ၍ အထကျလမျးပညာဆရာ ဘာပွောသလဲ
ကနြျောကိုယျတိုငျက သှားဆေးတကျနပေါတယျ။ အလုပျသငျဖွဈတော့မှာပါ။ ခုတတျမွောကျလိုကျစားနတေဲ့လောကီ ပညာနဲ့ ငှကွေေးလုံးဝမတောငျးဘဲ စဈဆေးကုသပေးလကျြရှိပါတယျခရိယာနျဘာသာဝငျ ၊အစ်စလာမျဘာသာ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာရယျမခှဲခွားဘဲ လူအသကျကယျကောငျးတော့ ..မွှကေိုကျလူနာ ၊ ရောဂါရှာမရဘဲ ဒုက်ခဖွဈငှကေုနျဖွဈတဲ့ ပယောလူနာတှေ ၊ ရောဂါကွောငျ့မဟုတျဘဲ ရူးသှပျနတေဲ့သူတှကေို ကုသပေးတာအကုနျလူကောငျးပတိဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလိုမှအဖွရှော မရ၊ သူ့မ body ဘယျမှာရှိလဲ ဆိုတာဘယျသူမှရရေရောရာ တောငျမသိနိုငျပါဘူး။
၁။ သူ့အကြီင်္ စုတျပွတျသကျနတေဲ့ကိစ်စ။
၂။ မုနျ့စားခဲ့တဲ့ကိစ်စ (မုနျ့စားထားတာထငျတဲ့ ကိစ်စ)
၃။ မုနျ့နားမှာ ၊အကြိံင်္အနား၊မကျြမှနျအနား အလောငျးရှာမရတဲ့ကိစ်စ။
၄။အကြီင်္မှာ သှေးတဈစကျမှ မပခေဲ့တာ။
၅။သူမ ခကျြခငျြး ၊ သဆေုံး၏ ၊မသဆေုံး၏ ။ ဟူသော အကွောငျးအရာကို ကနြျောတတျတဲ့ အကွားအမွငျပညာ အထကျလမျးပညာ၊လောကီပညာနဲ့…၊ သူမအတှကျကွညျ့ခဲ့ပါတယျ။ သူမကိုပိုသခြောအောငျ ချေါမေးပါတယျ။
ထိုနောကျအမစိမျ့ထကျကို ချေါမေးပါတယျ။… ။
သူ့ကိုကနြျောအာရုံထဲ မှာ… သူပုံမွငျရပါတယျ။သူငိုနပေါတယျ…၊ နဂို မူလ လူပုဂ်ဂိုလျရုပျဖနျဆငျးပေးပွီး တဈခှနျးခငျြးကနြျောနဲ့ အမေးအဖွလေုပျခဲ့ပါတယျ။(2:45min)ကစပွီး
အဖွေ….မုနျ့ကို သူမစားနိုငျခဲ့ပါဘူး၊အရငျကစားထားတာေးထညျ့ထားတာပါ၊ လို့ပွောပါတယျ…
သူပွုတျကတြော့….အကြီက လြောတိုကျပွီး တောငျစှနျး၊ အတကျတှနေဲ့ခြိတျပွီး ကြှတျသှားခဲ့တယျ။
ကမြ…ခွထေောကျ ဒူးအောကျ ညိုသူကွီး နှဈဖကျစလုံးကြိုး သှားတယျ…။ လှုပျမရပါ။
ခန်ဓာကိုယျမှာက ပှနျးပဲ့ ဒဏျရာလောကျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အကြီင်္ပျေါမှာ သှေးမပပေါ။
၃။အလာငျးက ရှာ မရခဲ့တာ က…ကမြက အကြီင်္ ကနျြခဲ့တဲ့ နရောနဲ့..ပေ၄၀၀လောကျအကှာထိ…လြောကသြှားခဲ့တာ…။ သတိ၁၀မိနဈကြျောလောကျ သတိလဈသှားတယျ…သတိ လညျလာတော့…၊မတျတပျတောငျ မသှားနိုငျခဲ့ဘူး။မရပျနိုငျခဲ့ ပါ။
သူဆကျပွောတယျ…၊ထပျငိုတယျ၊ သူ့ ၆နာရီ လောကျထိ မသခေဲ့ဘူး။ ဒူးထောကျပွီး လြိုခြောကျထိပျ ပျေါလညျးမတကျနိုငျတော့…အောကျဘကျမှာ
လှတျလမျးရှိမလားဆိုပွီး… ၆နာရီ လောကျထိ ဒူးထောကျလကျအားပွုပွီး ဆငျး တာ…
အေးတဲ့အရှိနျနဲ့ ကမြငုပျတုပျအသကျထှကျခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ကမြ သတေော့…ကနြျောကိုယျကမြပွနျမွငျရပါတယျ။ကမြအလောငျးနားမှားထိုငျငိုတယျ။ ကမြ ထငျတာ…၊ ကမြ ခန်ဓာကိုယျကတဈဖွညျးဖွညျးအေးတောငျ့ပွီး ၊ ရှကေို့လညျး ညှတျနတေော့ ဘောလုံးလို လြိုအောကျ ကို တောကျလြောကျလိမျ့ဆငျးသှားတာ ပေ၃၀၀၀ကြျောလောကျ ထပျ ဆငျးသှားတယျထငျတယျ။
ကနြျောဆကျမေးတယျ….အလောငျးကို ရောနှငျးတှဖေုနျးသှားပွီလား… အမစိမျ့ထကျ…ဖုံးသှားပွီ..။ ကနြျော့ပညာနဲ့ကွညျ့တော့….သူမဟာ တောငျ ထိပျ ခြောကျထိပျကနေ…ပေ အနကျ၅၆၂၅ပမှော… Dead body ရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ။
သူ့မ ….ဟုတျတယျပေ၅၀၀၀ကြျောမှာ ရှိပါတယျ. … သူ့လှယျအိတျလေးရောပါတယျပွောပါတယျ(မှနျမမှနျတော့မပွောတတျပါ) တဈခု က ကာယကံရှငျမိသားစု ယုံပါလို့မပွောပါဘူး၊ လကျတှအေ့နနေဲ့ သူ့အမေ၊ မောငျနှမဆီမှာ ဝငျပူးခိုငျးပွီးအကုနျမေးလို့ရနိုငျပါတယျ။ ပိုကျဆံတဈပွားမှလညျးမယူပါဘူး၊ Onlineပျေါလညျးနာမညျမကွီးခငျြပါဘူးနျော၊ကူညီခငျြတဲ့စိတျပဲရှိပါတယျ။
Commentတဈခု ကို ဖတျလိုကျရလို့… ဒီလိုလောကီပညာ နဲ့ ကွညျ့ကွပါလား…ဆရာတို့ ဆိုလို့…။ အမစိမျ့ထကျကိုလညျး သနား လို့ပါ။ ကနြေျာ့ ခွသေလုံးကို ကိုငျခှငျ့ပွုထားတော့… သူ အမေ၊အဖတှေကေိုပွောစရာတှရှေိတယျဆိုတဲ့အကွောငျးနဲ့…သူအစဈပါဆိုတာ ဘယျညာခါပွခိုငျးတာဘယျညာ ခါပွရှာပါတယျ။
ကနျြတာ ဘာမေးရမှနျးမသိလို့…နတျဝိဇ်ဇာမြားကို သူမနရောမှနျ ပွနျပို့ပေးခိုငျးပွီး လှတျပေးလိုကျပါတယျ။ 3:30မှာ မေးပွီးပါတယျ။ ကြှနိုပျသညျ…မဟုတျမမှနျ မ စိမျ့ထကျ ဝိညညျ (ခရိယာနျဘါသါဝငျတို့နားလညျလှယျအောငျ)အား မချေါဘဲ ၊ ယခုပါ အမေးအဖွေ မြားကို မဟုတျမမှနျ ရေး ခဲ့ပါက…၊ အဓိဠာနျမမေး အာရုံမပွူဘဲ လိမျညာပွောပါက ယခုတတျမွောကျထားသော အထကျလမျးပညာရပျအားလုံးခကျြခငျြးပကျြပါစေ…၊ သှားလရော ဘေးတှပေ့ါစေ…။ မှနျကနျစှာ သနား၍ ကူညီ ပါက… အတိုငျးမသိပညာတိုးပါစေ…၊ ၇ရကျသားသမီး မြားကို ကနြျောတတျသောကောငျးသောပညာရပျမြားဖွငျ့ကူညီကယျရပါစေ။သတညျး…
ဥပဒေ နဲ့လညျး မပတျသကျခငျြပါ။ ခနျြထားခဲ့သူတှကေိုလညျး တမငျပကျြစီးလိုတဲ့စိတျဆန်ဒလုံးဝလုံးဝ စိတျကနတေောငျမကွံပါဘူး။ ဒါကကနြေျာ့တတျမွောကျတဲ့ပညာနဲ့ကူညီပေးတာပါ။ တဈပါးသောလူပုဂ်ဂိုလျအပျေါကြှနိုပျဆရာသညျ ပကျြစီးစလေိုတဲ့ ဆန်ဒရှိပါက… ကြိနျဆို၊သစ်စာရသေောကျပွောရဲပါကွောငျး။
ကနြျောသညျသစ်စာတရားကိုအသကျထကျ တနျဖိုးထားသူပါ။ ဤပညာတတျဖို့.. ယနခြေိ့နျထိ အရကျပါသော မညျသညျ့အစားအစာအရညျကို ဆေးဖွဈတောငျမမှီဝဲခဲ့ပါဘူး…ရာသကျပနျထိနျးသိမျးထားသူပါ။ သူတဈပါး သားမယားကိုလညျးခိုးယူမပေါငျးသငျးခွငျး။ သူတဈပါးထိခိုကျစတေဲ့ မဟုတျမမှနျလိမျညာခွငျးလုံးဝမလုပျတဲ့သီလသစ်စာ။ ထိုသစ်စာ မြားကို အသကျလိုတနျဖိုးထားတဲ့အထကျလမျးဆရာပါ။
Credit – ဆရာအောငျမြိုးမငျး
တဖကျမှာလဲ တောငျတကျရငျးပြောကျဆုံးသှားသော မစိမျ့ထကျရှိမညျ့နရောအား အတိအကလြမျးညှနျပွသပေးနိုငျသော မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးမဆို ဆုတျောငှေ သိနျး (၅၀) ပေးမယျလို့ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ဒီတစ်ခါမှာလည်း ပြိုင်ဘက်ကို ပထမအချီမှာ အလဲထိုးပြီး အနိုင်ယူပြန်လိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း .
မောက်တောင်း (လားရှိုး) ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းလုံး မီးလောင်တာတောင်...
လှူဒါန်းသူတွေရဲ့ စေတနာများဖြင့် ..မုန့်နဲ့ အစားစာတွေ ..ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့…...